Ahoana ny fomba hananganana fiaraha-miasa any ambanivohitra any amin'ny tanàna nilaozana | Vaovao momba ny dia
Any Espana, ny faritra ambanivohitra dia mijaly amin'ny fihenan'ny mponina. Ny fifindra-monina any amin'ny toerana an-tanàn-dehibe kokoa sy ny isan'ny olona efa antitra dia namela ny tanàna sy ny tanàna sasany nilaozana tanteraka, teo amoron'ny fanjavonana. Saingy, manoloana io fomba fijery pessimistic io dia misy ny fandraisana andraikitra mpanavao izay mitady hamerina ireo olona ireo ho velona ary nohamafisina tamin'ny firongatry ny olona mitady toerana madio sy mangina kokoa mba hialana amin'ny fandotoana sy ny hafaingan'ny tanàna.
El coworking safidy mahaliana io mamorona fotoana ahafahana miasa any amin'ireo vohitra nilaozanaHetsika iray izay mihoatra ny fizahan-tany ary mety hahasoa tokoa amin'ny fampiorenana ny mponina, hamelona ny toekarena ao an-tanàna, hampahafantatra azy ireo, hanokatra azy ireo amin'ny fotoana vaovao ary hanampy ny besinimaro. Alohan'ny hilazako aminao anefa ny fomba fananganana mpiara-miasa any ambanivohitra, andao hametraka izany ary ahoana marina ny coworking.
1 Inona no atao hoe mpiara-miasa ary ahoana ny fiasan'izy io?
2 Inona no atao hoe mpiara-miasa ambanivohitra?
2.1 Misy toerana malalaka
2.2 Loharano sarobidy indroa
3 Ahoana ny fomba hananganana ny mpiara-miasa aminao any amin'ny tanàna nilaozana?
3.1 Mitadiava toerana
3.2 Halalino ny toerana anananao
3.3 Eritrereto ny soso-kevitra momba ny sanda
3.4 Mamorona paikady fifandraisana
3.5 Inona avy ireo fomba ara-dalàna tokony hataoko?
Inona no ary manao ahoana ny coworking?
El coworking dia fomba fiasa izay mamela ny matihanina tsy miankina hizara sy hivoatra amin'ny sehatr'asa iray ihany. Amin'izany fomba izany, na dia samy miasa amina tetikasa samihafa aza ny tsirairay, satria tsy voatery hiditra ao amin'ilay orinasa iray akory izy ireo, ny fiaraha-miasa eo amin'ny olona samy manana ny fahaizany sy avy amin'ny sehatra samihafa se mandrisika ny famoronana tetikasa iaraha-miasa. Saingy ... Ahoana no mampiavaka ny habaka coworking avy amin'ny birao iraisana sa ivon-toeram-piasana nentim-paharazana? Manodidina io filozofia asa io, vondrom-piarahamonina mpiara-miasa. Ity vondrom-piarahamonina ity dia mitantana a mpanao trano, olona tompon'andraikitra amin'ny fahalalana ny mombamomba ny tsirairay mpiara-miasa ary izany dia mampifandray azy ireo amin'ny tsirairay mba hanomezana sakafo, ka ny fanahin'ireo habaka ireo.
Ahoana no ataon'ny coworking? Raha ny tenany dia tsotra ny fandidiana satria tsy mila fotodrafitrasa be loatra hametrahana azy ireo. Ny fampiasa fototra dia ny: fifandraisana Internet tsara, andiam-pitsipika napetraka ho an'ny fiaraha-miaina sy toerana malalaka hanokafana izany amin'ny hafa. Noho izany, izay rehetra afaka manolo-tanana amin'ny solosaina findainy sy miditra amin'ny fiarahamonina. Raha ny marina, maro amin'ireo fandraisana andraikitra ireo no mipoitra any amin'ireo birao misy izay misy toerana malalaka ary ny tompony dia manapa-kevitra ny hanokatra izany amin'ireo matihanina hafa ary, mazava ho azy, amin'ny hevitr'izy ireo.
Inona no atao hoe mpiara-miasa ambanivohitra?
Iray amin'ireo tombony azo amin'ny habakabaka coworking io no malefaka avelan'izy ireo amin'ny lafiny misy azy ireo. ny mpiara-miasa aminy miasa sy mifandray amin'ireo orinasany, raha tsy izany mahaleotena, lavitra, ka tsy mila miasa amin'ny toerana manokana izy ireo. Tendrombohitra a coworking ao amin'ny vohitra iray nilaozana dia lasa hevitra tsy azo atao fotsiny, fa azo iainana Fa maninona ireo vohitra nafoy no toerana mety indrindra amin'ny fananganana a coworking?
Misy toerana malalaka
Raha misy zavatra tavela any amin'ireo tanàna nilaozana dia habaka io. Manana toerana mety hahitanao fiaraha-monina coworking Tsy izany, amin'ny ankapobeny, no olana. Ho fanampin'izany, ny kalitaon'ireo habaka ireo dia tsy maintsy asongadina. Ny tontolo ambanivohitra dia manana toetra izay zara aza ho hita amin'ny toerana an-tanan-dehibe kokoa.
Voalohany, ny ambany kokoa ny vidin'ny tany sy ny trano, ka rehefa mamorona vaovao coworking ny fampiasam-bola voalohany tsy tokony ho avo dia avo. Etsy ankilany, ny toetran'ny tontolo ambanivohitra dia manintona izaitsizy ho an'ireo matihanina mitady hiasa amin'ny tontolo mangina sy tsy mitabataba. Ny fahanginana anefa tsy ny tombontsoa tokana. Mandraisa anjara a coworking avelan'ny ambanivohitra mpiara-miasa aminy mankafy ny sehatra iraisana maitso sy madio amin'ny fotoana malalaka anananao. Ity tontolo iainana ity, mety indrindra amin'ny fanapahana, dia hanampy amin'ny fampitomboana ny vokatra ateraky ny mpiasa ary ny fifandraisana akaiky eo amin'izy ireo, izay iray amin'ny tanjona lehibe coworking.
Loharano sarobidy indroa
El coworking ny ambanivohitra dia tsy hitondra soa ho an'ny mpanorina azy fotsiny ary mpiara-miasa aminy izay mandray anjara amin'izany. Mila hetsika vaovao ny vahoaka haingana mba hamonjy azy ireo amin'ny fanjavonana. El coworking fomba vaovao hisarihana ny olona raikitra sy hamelomana ireo vohitra foana.
Na dia marina aza fa, amin'ny fitsipika, mpiara-miasa aminy izay mandeha amin'ireto toerana ireto dia manao izany vonjimaika, miovaova ny vondrom-piarahamonina, maniry ary mamelona ireo mpiasa vaovao. Noho izany dia misy ny filàna manodidina ireo birao manokana ireo. Toeram-pisakafoanana, gym, biraon'ny fizahantany, mpikarakara làlan-tongotra, fivarotana, fivarotana lehibe ... Orinasa maro karazana no hanana toerana rehefa manolotra serivisy ho an'ireo vondrom-piarahamonina ireo. Ireo orinasa ireo dia mety hanana mpiasa olona hifindra sy hijanona ao an-tanàna. Noho izany dia tsy tokony hieritreritra an'ity famporisihana ity isika raha toa ka loharanom-asa fotsiny ho an'ireo izay tafiditra mivantana ao amin'ny coworkingfa amin'ny maha a loharanom-bola ho an'ny tanàna iray manontolo.
El coworking Manome vahaolana amin'ny iray amin'ireo olana lehibe ateraky ny fizahan-tany ambanivohitra, ny fiainana ara-nofo. famoronana rafitra sy tambajotram-barotra izay ilaina sy mahasoa mandritra ny taona. Andeha ho tadidintsika izany mpiara-miasa Tsy biraon'ny trano nohofana amin'ny orinasa izy ireo, ary tsy toeram-pizahan-tany izay natao handaminana traikefa iaraha-miaina, fa sehatra hananganana fiaraha-miasa sy hanatsarana ny vokatra ary hiasa mandritra ny taona.
Ahoana ny fomba hananganana ny mpiara-miasa aminao any amin'ny tanàna nilaozana?
Raha te hipetraka amin'ny tanàna kely ianao na manontany tena hoe ahoana no hamerenana azy io, raha ny hevitra a coworking toa safidy mahaliana ny any ambanivohitra, tandremo ity famintinana manaraka ity an'ny dingana tsy maintsy arahinao mba hametrahana ny anao manokana coworking ambanivohitra any amin'ny tanàna iray nilaozana.
Izahay dia efa nanitrikitrika ny maha-zava-dehibe ny habakabaka ary nanamafy izany ho an'ny a coworking asa dia zava-dehibe ny fananana toerana sahaza. Soa ihany fa misy toetra mampiavaka ny tontolo ambanivohitra izay manome lanja fanampiny ho an'ny habakabakao. Ny hazavana voajanahary be dia be, ny habaky ny habakabaka, ny fitoniana ilaina amin'ny asa: ireo dia singa iray izay omena lanja tsara amin'ny fiaraha-miasa ary afaka manome azy ireo ny tontolo ambanivohitra.
Raha ny hevitrao amin'ny fananganana a coworking Mipoitra avy amin'ny finiavana hanampiana ny famerenana ny tanàna iray izay efa anananao ny fananana, efa nandroso dingana kely ianao. Etsy ankilany, raha mipoitra ny hevitra satria mitady fotoana matihanina lavitra ny tanàna ianao dia tokony ho fantatrao fa misy fananana ary na dia tanàna iray manontolo amidy aza ary azonao atao, amin'ny alàlan'ny Internet, hanombohana ny tetikasanao .
Halalino ny toerana anananao
Rehefa mividy tany hametrahana ny coworkingRaha ny mahazatra dia dinihinao io toerana io alohan'ny ahazoanao azy. Alohan'ny hividianana dia alao antoka fa mety ny fepetra hanatanterahana ny hevitrao. Fa raha efa manana habaka hatramin'ny voalohany ianao dia zava-dehibe ny handinihanao azy tandremo ny tanjakao sy ny fahalemenao. Tsy maintsy manontany tena ianao hoe inona no mety ho anjara birikin'ity habaka ity amin'ireo izay tafiditra ao aminy ary fantaro izay olana aterak'izy ireo ary iza amin'ireo olana ireo no voavaha. Ity fandalinana ity dia hanampy anao koa farito izay ho tanjon'ny mpihaino anao. Raha vantany vao azonao mazava tsara dia ho mora kokoa aminao ny mampifanaraka ny toerana misy anao amin'izay ilainao.
Na dia betsaka aza ny tombony amin'ny fametrahana ireo toeram-piasana ireo any amin'ny tanàna na tanàna dia tsy ny rehetra no mailo. Azo idirana dia takiana lehibe ho an'ny a coworking miasa fa tsy ny tanàna rehetra dia manana tamba-jotra fitaterana ahazoana aina sy mahomby. Fifandraisana amin'ny Internet Ity dia teboka iray hafa manan-danja ary, na dia mihombo izao tontolo izao aza ny tamba-jotra, dia mbola misy ihany ny toerana izay miadana na tsy milamina ny fifandraisana sy ny fandrakofana. Tamin'ny farany, toe-piainana tontolo iainana azon'izy ireo atao koa ny manasarotra ny fiasan'ilay tetikasa. Raha ny tanàna na tanàna resahina dia any amin'ny faritra lavitra loatra na misy toetr'andro tafahoatra, dia tokony horaisinao izany rehefa manamboatra ny habaka sy miantoka ny famatsiana.
Eritrereto ny soso-kevitra momba ny sanda
Rehefa manolotra ny mpiara-miasa aminao ianao dia tsy manofa latabatra any amin'ny birao hizarana fandaniana, manolotra habaka iray izay hampiroboroboanao ny famoronana tambajotra, hevitra ary tetikasa iraisana. Noho izany, tsy ampy ny mamela ny toeram-pivoriana ary manao dokambarotra izany amin'ny pejy web. Raha te-hanomboka amin'ity filozofia asa ity no tadiavinao dia mila manome zavatra hafa ianao. Zava-dehibe ny mamaritra izay mahatonga anao coworking ambanivohitra tolo-kevitra manintona iray ary amin'ny fomba ahoana, hampiroboroboana ny fiaraha-miasa sy ny fisehoan'ny fotoana vaovao.
Ka alohan'ny hanombohana dia tokony lazao mazava izay mampiavaka ny volavolanao, satria ianao coworking ny ambanivohitra dia afaka mahazo tombony amin'ny ho avinao mpiara-miasa aminy ary ny fomba hikolokoloana ireo tetik'asa tsy miankina aminy (satria tsy hoe mikatsaka hamorona tetikasa iraisana fotsiny).
Mamorona paikady fifandraisana
Na izany aza, tsy ampy ny mazava momba ny tanjaky ny anao coworking. Zava-dehibe ny mpandray anjara fantaro ny tetikasanao. "Izay tsy ampitaina dia tsy misy" ary izany dia zavatra tsy maintsy ampiharinao ao amin'ny anao coworking ambanivohitra. Tsy misy dikany ny fananana fotodrafitrasa tsara indrindra, ny toerana tsara indrindra na ny hevitra tsara indrindra raha tsy afaka milaza amin'ny hafa ny fanahin'ny tolo-kevitrao ianao.
Noho izany, ny tambajotra sosialy no ho lasa mpiara-miasa lehibe aminao hampahafantatra sy hampahafantatra ny anao coworking. Na izany aza, ny paikadim-pifandraisanao dia tsy tokony hoferana amin'ny dokam-barotra na ny fisian'ny tsindraindray amin'ny tambajotra. Ianao dia tokony mamorona marika hampiroborobo, amin'ny sarinao sy ny mombamomba anao. Tokony ho eo foana ianao amin'ny tambajotra sosialy ary mamorona tranokala manintona izay napetraka ao anaty motera fikarohana. Ny atiny aparitanao ao amin'ny piraofilinao dia tokony votoaty sarobidy. Tokony hanolotra mihoatra ny doka fotsiny ianao raha tianao hahaliana azy ireo ny anao coworking. Mampiely momba ny filozofia an'ny mpiara-miasa Ny faritra ambanivohitra, momba ny fiainana any an-tanàna na ny fizarana ny fomba fiasan'ny habakanao isan'andro, dia hevitra tsara hampanakaiky ny tetikasanareo amin'ny besinimaro.
Inona avy ireo fomba ara-dalàna tokony hataoko?
Un coworking bizina ny ambanivohitra ary noho izany ny fametrahana azy io mila mametraka drafitra fandraharahana ianao ary manana licence vitsivitsy. Ny drafitra fandraharahana dia mametraka raha velona ny tetikasanao na tsia ary raha manana famatsiam-bola ampy ianao hanombohana azy. Raha ny momba ny fahazoan-dàlana, dia mety iray amin'ireo olana manome anao marary andoha be indrindra. Raha ny tena izy dia tsy misy fahazoan-dàlana manokana ho an'ity karazana habaka ity, hiankina ifotony amin'ny karazana hetsika izay hatao ao izany. Mariho fa zava-dehibe ny fomba fiasa ary mila manokana ampahany amin'ny fampiasam-bolanao sy ny fotoanao ianao matokia mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna ny orinasanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ahoana ny fomba hananganana fiaraha-miasa any ambanivohitra any amin'ny tanàna iray nilaozana